राती खाना खाएर सुते : बिहान उठ्दा लिङ्ग परिवर्तन ! - inaruwaonline.com
राती खाना खाएर सुते : बिहान उठ्दा लिङ्ग परिवर्तन !
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ०३, २०७३ समय: १५:३४:३४
एजेन्सी / एक युवलाई तेस्रोलिङ्गीसँगको दोस्ती निकै भारी पर्यो । राती तेस्रोलिङ्गीहरुले खानामा नशालु पदार्थ खुवाएर यी व्यक्तिको लिङ्ग काटिदिएका छन् । बिहान उठ्दा मात्र यसबारे थाहा पाएका उनले पुलिसमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
घटना भारतको फर्रुखाबादको हो । यहाँ बस्ने बिरजू पुत्र महेश चन्द्र तेस्रोलिङ्गीहरुसँग विवाहमा नाच्ने गाउने गर्दथे । उनै महेशको लिङ्ग काटिएको हो ।पीडित युवकका अनुसार उनी गत नोभेम्बर २५ तारिखमा तेस्रोलिङ्गी कम्पिलसँगै गएका थिए । कार्यक्रम सकेर उनी २७ तारिखमा घर फर्किए ।
यसैबिच यउनको भेट प्रेमनगर निवासी रामकली नामक तेस्रोलिङ्गीसँग भयो । उनले केही काम भएकाले आफूसँग जान उनलाई आग्रश गरे । रामकलीले उनलाई आफ्नो घर लिएर गइन् र त्यहाँ खाना खुवाइन् ।
उनी भन्छन्, ‘खाना खाएपछि म बेहोस भएको थिएँ । जब बिहान आँखा खुल्यो तब मेरो पूरा दुनियाँ नै परिवर्तन भइसकेको थियो ।’ गत मंगलबार उनी निकै कठिनका साथ उनको चंगुलबाट भाग्न सफल भए । घर गएर उनले आफूमाथि बितेको घटनाबारे जानकारी दिए । बिरजुले यो विषयमा रामकलीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् । प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेपछि पीडितको मेडिकल जाँचका लागि पठाएको छ ।